रवि लामिछाने रिहा भएपछि उनलाई काधमा बोकर घर लान्छौ, सत्यको जीत हुन्छ – नायक रमेश उप्रेती - Halesi News
रवि लामिछाने रिहा भएपछि उनलाई काधमा बोकर घर लान्छौ, सत्यको जीत हुन्छ – नायक रमेश उप्रेती
चितवन। आज रवि लामिछाने सहित युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीलाई आज जिल्ला अदालत चितवनमा पेश गरिँदैछ । जिल्ला अदालत चितवनले उनीहरुलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न दिएको म्याद सकिएको छ । यसैबिच सुरक्षा व्यवस्थालाई मध्य नजर गर्दै हेटौंडाबाट हजार प्रहरी झिकाइएको छ । आज उनीहरुलाई अदालत पेश गर्ने क्रममा हुन सक्ने अप्रिय घटनालाई रोक्न ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।तीन जना अभियुक्त मध्ये युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीको बयान पूरा भएको भए पनि रविको बयान आंशिक रुपमा मात्रै सकिएको बताइएको छ । बयान नसकिएकै कारण पनि उनीहरुलाई थप अनुन्धानको लागि म्याद थप गरिने सम्भावना देखिएको छ ।
यसैबिचमा प्रहरीले दिपक बोहरालाई रविलाई भेट्न दिएको छैन्भने नायक रमेश उप्रतिले भटे गरेका छन् । भेटमा रमेशले रकिो आखा सत्य देखेको बताएका छन्
रविले आफ्नो कारणले कसैलाइ चोट नलागोस भन्ने चाहेको बताएका छन् । उनले रवि रिहा भएपछि काधमा बोकेर घर लाने बताएका छन् । रविलाई अन्य ८–१० जना बन्दीसँगै राखिएको र उनीहरका कुरा सुनेर उनले समय बिताइरहेको बताइएको छ ।
त्यस्तै उनलाई भेट्न जानले ई पुस्तक लगिदिएको बताइएको छ । आज परिवारका सदय बाहेक अन्यलाई भेट्न दिइएको छैन ।चितवनमा आज पनि प्रदर्शन जारी रहेको छ ।
Sabhar os bata
Prevचितवन पुगेर न्यायको पक्षमा शिशिर भण्डारी गर्जिए ! भने- रबि लामिछाने जस्ता सपुत जेल परे भने शिशिर भण्डारीहरु म*रे हुन्छ ! (भिडियो हेर्नुस) सबैले शेयर गरौं
Nextजिवित छँदै सिक्का निष्काशन गरिएका पहिलो व्यक्ति : जोशीको सम्मानमा तीन थरि सिक्का निष्काशन
काठमाडौंको बानेश्वर चोकमा दुई समुहबिच बोतल हानाहान, एक जना घाइते